फिनल्याड विश्वको सबैभन्दा खुशी मुुलुक, नेपाल कतिऔँ स्थानमा ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
फिनल्याड विश्वको सबैभन्दा खुशी मुुलुक, नेपाल कतिऔँ स्थानमा ?
७ चैत, एजेन्सी । विश्वभर कोरोनाभाइरसको सन्त्रास फैलिइरहेका समय संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले शुक्रबार फिनल्याण्डलाई लगातार तेस्रो वर्ष विश्वको सबैभन्दा खुशी राष्ट्र घोषणा गरेका छन् ।
‘खुशी राष्ट्रहरूका लागि सम्पत्तीको चेत, आपसी आनन्द र विश्वासको भावना, सहकारीता तथा साझा संस्थान तथा दायित्वका बिषयलाई गहन अध्ययन गरिएको थियो,’ अनुसन्धान रिपोर्ट तयार गर्नेमध्येका एक विज्ञ जोन हेलिवेलले विज्ञको तर्फबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये पाकिस्तानपछि अग्रस्थानमा अर्थात् सयौँँ स्थानमा परेको छ भने बङ्गलादेश १२५औँ, श्रीलङ्का १३०औँ, भारत १४०औँ स्थानमा रहेका छन् । अन्तिम तीन स्थानमा क्रमशः अफगानिस्तान, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र दक्षिण सुडान रहेका छन् ।
Previousपशुपतिको आरतीमा २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित नगराउन निर्देशन
Nextइटालीमा एकैदिन ६ सय ४७ जनाको मृत्यु, अधिकांश ६३ वर्षभन्दा माथि